विश्वकप २०१८ मा पानामाविरुद्ध इंग्ल्याण्डको कीर्तिमानी जित ! — Harpraharnews.com
विश्वकप २०१८ मा पानामाविरुद्ध इंग्ल्याण्डको कीर्तिमानी जित !
विश्वकप फुटबल २०१८ को समूह ‘जी’ अन्तर्गतको खेलमा इंग्ल्याण्डले पानामाविरुद्ध कीर्तिमानी जित निकाल्न सफल भएको छ । ६-१ ले हराएर जारी विश्वकपकै फराकिलो अन्तरको जितमा रसियासँग बराबरी गरेको इंग्ल्याण्डले आफ्नो विश्वकप इतिहासकै धेरै गोलको कीर्तिमान पनि बनाएको छ ।
सन् १९८६ मा पाराग्वे र पोल्याण्डलाई साथै सन् २००२ मा डेनमार्कलाई ३-० ले हराएपछि त्यो नै इंग्ल्याण्डको ठूलो अन्तरको जित हो ।
६३ औँ मिनेटमा इंग्ल्याण्डका लागि कप्तान हृयारी केनले मैदान बाहिरिनु अघि हृयाटि्रक पूरा गरेको थियो । खेलको २२ औं मिनेटमा पेनाल्टीमार्फत गोल गरेका उनले पहिलो हाफको थप समयमा दोस्रो गोल पेनाल्टीमार्फत नै गरेको हो । यस्तै उनले ६२ औं मिनेटमा गोल गर्दै हृयाट्रिक पूरा गरेको हो ।
रसिया विश्वकप २०१८ मा सर्वाधिक गोलकर्ताको सूचिमा अगाडि आउन सफल उनी विश्वकपमा हृयाट्रिक गर्ने इंग्ल्याण्डका तेस्रो खेलाडी पनि हुन् । यसअघि इंग्ल्याण्डका लागि १९६६ मा जियोफ रस्ट र १९८६ मा ग्यारी लिन्करले हृयाट्रिक गरेका थिए ।
खेलको आठौं मिनेटमा इंग्ल्याण्डले स्टोन्सको गोलबाट अग्रता लिएको थियो । त्यस्तै ३६ मै मिनेटमा लिंगाडले गोल गरेका हुन् ।
पानामाका लागि फिलिप बालोयले खेलको ७८ औं मिनेटमा गोल गरेको थियो ।
इंग्ल्याण्डको जितसँगै समूह ‘जी’ बाट इंग्ल्याण्ड र बेल्जियम अघिल्लो चरणमा पुग्न सफल भएका छन् ।
जर्मनीको स्विडेनविरुद्ध कठिन जित , नायक बने टोनी क्रुस
बुटवलको बजेट एक अर्ब ६६ करोड ५० लाख, २५ करोड शिक्षामा